COVID-19 – Dawn ဆေးခန်း
DAWN သည်ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေကိုဆက်ပြီးဂရုစိုက်နေတယ်. အကယ်၍ သင်သည် DAWN တွင်အချိန်ဇယားချိန်းထားပါက, ကျေးဇူးပြု၍ ဤရက်ချိန်းကို DWN ဆေးခန်းမှသင်ကြားသိရသည့်အပြင်ဖျားနာခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရသည်အထိစီစဉ်ထားပါ, ချောင်းဆိုး, ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း.
သင်ဤရောဂါလက္ခဏာများကြုံနေရသူတစ် ဦး လူနာဖြစ်လျှင်, ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့ဖုန်းခေါ်ပါ COVID-19 သူနာပြု triage လိုင်း 303-800-9677 Ext 504 .
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်အောက်တွင် COVID-19 နှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသည်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤစာမျက်နှာကိုပြင်ဆင်နေသည်.
ကျွန်တော်ရက်ချိန်းယူရန်လိုပါသလား, သို့မဟုတ်ငါလူနာတစ် ဦး လမ်းလျှောက်အဖြစ်ဝင်နိုင်ပါသလား?
လူနာတွေကိုလမ်းလျှောက်တာမရှိတော့ဘူး. တွေ့မြင်လိုသောမည်သူမဆို, လူနာအသစ်များအပါအ ၀ င်, ခေါ်သင့်တယ် 303-800-9677 Ext 504 ရက်ချိန်းယူသည်.
ကျွန်ုပ်၏ချိန်းဆိုမှုသို့ကျွန်ုပ်ကလေးများနှင့်မိသားစု ၀ င်များ / စောင့်ရှောက်သူများယူဆောင်လာနိုင်ပါသလား(s)?
ကျေးဇူးပြု၍ ကလေးများနှင့်မိသားစု ၀ င်များ / စောင့်ရှောက်သူများအားသင့်ချိန်းဆိုမှုသို့မပို့ပါနှင့်.
သင်သည်သင်၏အဖွဲ့ကိုတွေ့မြင်နှင့်တက်ကြွရောဂါလက္ခဏာတွေရှိရမယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောအဖျားကဲ့သို့, ချောင်းဆိုး, ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း, သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်နှာရည်အပါအဝင်အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ COVID-19 သူနာပြု triage လိုင်းသို့ဖုန်းဆက်ပါ 303-800-9677 Ext 504 သင့်ချိန်းဆိုမှုမပြုမီ. သူနာပြုသည်သင်ဆေးခန်းသို့လာသင့်သလားသို့မဟုတ်သင့်ရောဂါလက္ခဏာများမပျောက်မချင်းစောင့်ဆိုင်းသင့်မသင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်.
၀ န်ထမ်းများကညွှန်ကြားရန်သာသင်ဆေးခန်းတွင်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်သင့်သည်. When you enter the clinic through the front door, you will be screened for respiratory symptoms. If staff determine you have symptoms, they will give youamask and tell you how to wear it properly. If worn correctly, masks can help decrease the spread of respiratory viruses and bacteria.
ကိုလိုရာဒိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာနသာ (CDPHE) လူနာစမ်းသပ်နေသည်. အကယ်၍ သင်သည်စမ်းသပ်မှုစံများနှင့်ကိုက်ညီပါကသင်၏ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် CDPHE နှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်. လူနာ၏တောင်းဆိုမှုဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုမပြီးစီးနိုင်ပါ.
ယေဘူယျအားဖြင့်, COVID-19 စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည် 24 သို့ 48 နာရီ.
သင်၏မျက်လုံးများကိုမထိပါနှင့်, နှာခေါင်း, နှင့်ပါးစပ်.
ဖျားနာနေသောမိသားစု ၀ င်များကိုသင်မည်သို့စောင့်ရှောက်ရမည်ကိုစီစဉ်ပါ. သင်ဖျားနာနေလျှင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးသည်ဖျားနာလျှင်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ပါ. အိမ်တွင်သာမိုမီတာရှိပါကသင်သို့မဟုတ်သင်ချစ်ရသူတစ် ဦး ဖျားနာလျှင်ဖျားခြင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်.